Slurry Pombi, Horizontal Slurry Pombi, Froth Pombi - Boda
Unoda mumwe munhu anogona kuburitsa zvaunoda uye uve netsika dhizaini yakadhindwa kune yako yakatarwa. Ipapo yedu OEM / ODM sevhisi ndeyako!Verenga Zvimwe
Tenga kurongeka kwakazara mushure mekusimbisa kunaka kwechigadzirwa.Ipapo yedu Sample Order sevhisi ndeyako!Verenga Zvimwe
Ndinoda kushanyira China uye vanofarira kushanda nesu. Ipapo yedu Factory Tour sevhisi ndeyako!Verenga Zvimwe
TIRI MUNYIKA YOSE
Kambani yedu ine mainjiniya epamusoro uye matekinoroji ekirasi. Iyo ine zvakare matarenda ehunyanzvi ekushambadzira anoziva kutengeserana kunze kwenyika zvine hunyanzvi uye ane ruzivo rwakakura uye azere nehupiyona nemweya wekugadzira. Kambani yedu ichashanda kupfungwa "Yakatarisana nevanhu, Bhizinesi kutendeseka" uye kugutsa zvinodiwa nevatengi nekukurumidza uye nemazvo; Kunze kweiyo ine sainzi manejimendi system uye inonetsa yemakambani tsika. Parizvino, mutengi wekambani anotora anopfuura makumi mashanu matunhu nenzvimbo. Yakatogadzira network yakasimba yekushambadzira, yakanyatsokodzera sevhisi system uye firm trading association.
Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd inotarisa zvakanyanya pakugadzirwa uye kupihwa kwemhando yepamusoro slurry pombi uye slurry pombi zvikamu. Mapombi edu akagadzirirwa nzvimbo dzakaomarara uye dzinotyisa dzekupomba. Dzinogona kugadzirwa nepamusoro chrome, dzakasiyana siyana elastomers kana ichangoburwa muzvigadzirwa zveceramic zvehupenyu hwesevhisi hurefu uye hunyanzvi hwepamusoro.
Inonyanya kushanda pombi & pombi inotyairwa midziyo, pombi zvikamu & kuramba kupfeka castings, mamwe hydraulic muchina, accessories nezvimwewo. Zvigadzirwa zvine slurry pombi, API 610 peturu-mafuta & makemikari pombi, mvura pombi dzine makumi ezvitevedzana, anopfuura zana. mhando , zviuru zvemhando. Iwo anoshandiswa zvakanyanya mumigodhi, simbi, migodhi yemarasha, simba remagetsi, peturu, makemikari, mvura uye dhizaini indasitiri uye zvichingodaro.
Iwo zvikamu zvinochinjika neimwe yeanonyanya kuzivikanwa mabhureki pasi rese mune inotsvedza pombi bhizinesi. Izvi zvinoreva kumwe kudzikiswa kwemitengo yevatengi nekuda kwekubatanidzwa kwezvinyorwa uye kuchinjika nemidziyo iripo. Haisi chete iyo Boda inopa yemakwikwi mitengo uye kukurumidza kuendesa isu tinozvikudza pachedu padanho rebasa uye nerutsigiro rwehunyanzvi rwatinopa kune vatengi vedu.
Haisi nyaya yekuwana mutengo wakanakisa uye kuendesa asi sevhisi yakanakisa zvakare. Ini ndinofunga iwe uchaona kuti kugadzira mudiwa weShijiazhuang Boda Industrial Pump Company ichave yako yakanakisa sarudzo yekuwana kukosha kwechokwadi mukugadzirisa ako slurry pombi matambudziko.
Kambani yedu ichashanda kupfungwa "Yakatarisana nevanhu, Bhizinesi kutendeseka" uye kugutsa zvinodiwa nevatengi nekukurumidza uye nemazvo; Kunze kweiyo ine sainzi manejimendi system uye inonetsa yemakambani tsika. Parizvino, mutengi wekambani anotora anopfuura makumi mashanu matunhu nenzvimbo. Yakatogadzira network yakasimba yekushambadzira, yakanyatsokodzera sevhisi system uye firm trading association.